Shacabka Ayshaca oo Qaaday Koobka Garnaqsiga iyo Rumaysnaanta Islaamka. – Rasaasa News
Shacabka Ayshaca oo Qaaday Koobka Garnaqsiga iyo Rumaysnaanta Islaamka.
Jijig, Apr 21, 2014 – Magaalada qadiimiga ah ee Ayshac oo ay degan yihiin shacabka ugu bisil siyaasada, ilbaxnimada iyo raadadka taariikhda degaanka waxay muujiyeen ficilo geesinimo leh, ka dib kolkii ay booqdeen wafti uu hogaaminayo Madaxwaynaha degaanka Somalida iyo waliba waftigii heer federal.
Magaalada Ayshaca oo uu ka dhacay shir balaadhan, waxay ku dhaqaaqday arimo muhuum ah oo aad uga farxiyey shacabka degaanka Somalida. ESTV, ayaa markii ugu horaysay baahiyey sheekh reer Ashiciga oo si geesinimo leh Aayadaha Quraana Kariimka uga Akhriyeya shirka ay wada yeesheen wufuuda iyo shacabka magaaladu.
Mid ka mid dadka akhrista bogga RasaasaNews, oo fariin gaaban u soo diray bogga, ayaa yidhi “waan ilmeeyey kolkaan arkay ESTV oo sheekh Quraan ka akhriyayo.” Heerkaas ayaa laga aaminsan yahay ESTV iyo degaankaba in ay ka taagan yihiin Islaamnimada. Aayado kooban ayaa eeddo badan ka duwi lahaa argatidaydda.
Shirka Ayshaca kuma ekayn uun in Quraan lagu furay shirka, oo waliba ESTV laga siidaayey, laakiin waxaa laggaga hadlay arimo geesinimo mudan in laggaga daydo shacabka Ayshaca oo si geesinimo leh u garnaqsaday.
Shababka reer Ayshaca, waxay sanad walba xusaan gumaadkii ka dhacay magaalada Ayshaca sanadkii 1960, kaas oo lagu gumaaday in ka badan saddex boqol oo ruux. Goobta uu ka dhacay gumaadku oo laga dhisay Iskuul, ayaa waxaa gidaarada ku xardhan halkudhagyo ku qiiro galinaya oo muujinaya dhibaatada Gumaysiga iyo magacyada qaar ka mid ah dadkii la xasuuqay.
Shirka ay la galeen dawlada Atoobiya reer Ayshaca waxay dalbadeen qodobo muhiim ah oo ka duwan kuwa ay codsadaan shacabka degan degmooyinka kale ee Somalida. Qodobada ay codsadeen waxaa ka mid ahaa;
1. In lagu daro taariikhda Atobiya iyo midka degaanka gumaadkii Ayshaca iyo in loo dhiso taalo lagu xasuusto dadkaas.
2. In ay dawladu u tacsiyeyso ehelada dadkii la laayey una aqoonsato dhibanayaal.
3. Waxay shacabka reer Ayshaca codsadeen in aan dhulkooda la keenin dad laga keeno degaamo kale, iyaga oo ka shakisan mashaariicda dib u dajinta ee ka socda gabalka Sitti.
4. Waxaa kale oo ay codsadeen in la soo celiyo Tareenkii ka dhex shaqayn jiray Jabuuti iyo Dire Dawo.
Waftiga labo dhinaclaha ah ayaa qaaday codsiga reer Ayshaca, iyaga oo hor dhigi doona dawlada federalka Atobiya.
Ayshaca ayaa noqotay degmadii ugu horaysay degmooyinka degaanka Somalida, oo si geesinimo leh u garnaqsatay, iyada oo aan ku mashquulin manasheegadka Ismaamulka.
“Dabadii ka cabsade codkiis ma bogto” horumarinta beenta ah ee Ismaamulku ugu manasheeganayo shacabka qodista Barkadaha ay bixisay kharashkooda pastoral community development projects [PCDP] wanaag ma horseedayo. Kalsooni aan cidna codkeeda lagu cabdhin waxay camiri kartaa nabada degaanka oo cayisha iyo isbadal dhab ah.
Maamulka Somaliland oo Digniin Culus u Diray Atobiya!
Roob La,aan ka Jirta Degaanka Somalida Ogadenia